Miasa ao am-pon’ny mpianatra
"Ary raha ny Fanahin' Izay nanangana an'i Jesôsy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia Izay nanangana an'i Kristy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny Fanahiny, Izay mitoetra ao anatinareo" — Rom. 8:11.
Nampiasa ny Fanahiny Masina ny Tompo Andriamanitry ny lanitra nandritra ny vanim-potoana nifandimby, hiasa ao am-pon'ireo mpianatra ao amin'ny sekoly (Battle Creek College), ka hanaiky Azy amin'ny lalany rehetra izy ireo ary mba ho Izy no hitarika ny dian'izy ireo. Indraindray dia mahery vaika ny fiasan'ny Fanahy Masina ka hadino hatramin'ny fianarana, ary re ny feon'Ilay Mpampianatra lehibe tsy mbola fantatr'izao tontolo izao, manao hoe: "Mankanesa aty amiko, hianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa Izaho no hanome anareo fitsaharana. Ento ny ziogako, ka mianara amiko; fa malemy fanahy sady tsy miavona am-po Aho; dia hahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo hianareo. Fa mora ny ziogako, ary maivana ny entako".
Mandondona eo amin'ny varavaran'ny fo ny Tompo, ary mahita aho fa indro teo ireo anjelin’Andriamanitra. Toa tsy misy mihintsy ezaka manokana nataon’ireo mpampianatra mba hitarihana ireo mpianatra hifantoka amin’ny zavatry ny lanitra, kanefa manana Mpitily Andriamanitra ao amin'ny sekoly, ary na dia tsy hita maso aza ny fanatrehany, dia azo tsapain-tanana kosa ny asany. Nisy ombieny ombieny ny famantarana ny fanatrehan'llay Mpitily masina ao an-tsekoly. Niteny hatrany amin'ireo mpianatra i Jesôsy manao hoe: "Indro, efa mitsangana eo am-baravarana Aho ka mandondona; raha misy mihaino ny feoko ka mamoha ny varavarana, dia hiditra ao aminy Aho ka hiara-misakafo aminy, ary izy Amiko" — Apok. 3:20.
Efa niandry ela loatra ny Tompo vao afaka manome fifaliana lehibe sy tsara indrindra ho an'ny fo. Ireo rehetra izay mijery Azy amin'ny fo tsy mizarazara, dia homeny fitahiam-be. Noho izany, ireo izay mijery Azy dia mahita tsara an'i Jesôsy ho mpitondra ny helony, ho sorona ampy ho azy ireo, ary miafina antsefatsefaky ny vatolampy ka mibanjina Ilay Zanak'ondry